Archive du 08/03/2012
Ho avy ny SADC
Handamina ny fodian�i Dada
Mazoto tonga eto Madagasikara indray ireo fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Iraky ny OIF
Nihaona tamin�ireo vondrona nanao sonia tondrozotra
Nihaona tamin�ireo iraky ny OIF tetsy amin�ny Carlton ireo vondrona nanao sonia ny sori-dalana omaly.
Nanao rodobe tao Behoririka ny avy any Antsirabe
Niavaka omaly tetsy amin�ny kianjan�ny Finoana Magro Behoririka ny fahatongavan�ny mpitolona avy any Antsirabe sady solontenan�ireo vahoaka niambina ny fianakavian�i Tojo Ravalomanana tany Manjakatompo.
Jeneraly Rakotoarimasy Lucien
Matahotra ny miaramilany
Ny CEMGAM, ny jeneraly Ndriarijaona Andr� no tazana nivezivezy tetsy sy teroa nikaroka ny vahaolana tamin�ny fitakian�ny manamboninahitra lefitra, amin�ny hanafoanana ilay tataon-ketra amin�ny tambin-karaman�izy ireo.
Rakotodramboa Alfred Fiovana nampitondra faisana ny tantsaha no nentin�ny FAT
Izahay tantsaha no nofantsihana tamin�ireny vary nolazaina fa ho 500 ariary ireny ny kilao fony teny an-kianjan�ny 13 mey.
Andriambavilanitra sy ny 8 martsa
Samy hiseho amin�ny maha-izy azy
Hankalaza ny andro iraisam-pirenena hoan�ny vehivavy toy ny any amin�ny firenen-drehetra manamarika izany anio 8 martsa ny andriambavilanitra Malagasy. Raha ny fantatra sy heno dia samy hiseho amin�ny maha-izy azy avy izy ireo amin�izany.
Samy maka ho azy ireo fikambanam-behivavy
Samy manana ny fomba entiny hankalazana ny andron�ny vehivavy ny mponina ao Antsirabe ny andron�ny 08 martsa, anio.
Mianatra marina sa tsia ?
�Tsy nahitana fahatapahana fampianarana ny tao amin�ny oniversiten�i Mahajanga sy Toamasina��, teny nambaran�ny minisitry ny fampianarana ambony, Razafindrainibe Etienne izany taorian�ny fihaonana nataony tamin�ireo filohan�ny oniversite manerana ny nosy farany teo.
Ny fifamelana no baikon�Andriamanitra
Tsy misy afa-tsy ny fifamelana no antoka lehibe indrindra hivoahan�ny firenena amin�izao fahasahiranana mitranga izao.
Raha nisy zavara tena nalaza sy nahoraka tato anatin�izao tetezamita izao, dia ny resaka fitakiana sy fitokonana ary mifototra amin�ny tombontsoa ara-bola daholo izy ireny raha akapoka iray.